Aartii: 'Burushiin fakkii ittiin kaasu dhabee eegee fardaa mureen ittiin eegale' - BBC News Afaan Oromoo
Aartii: 'Burushiin fakkii ittiin kaasu dhabee eegee fardaa mureen ittiin eegale'
"Burushiin fakkii ittiin kaasu dhabee rifeensa eegee fardaa mureen burushii hojjedhe ittiin eegale," jedha ogeessi fakkii fi bobbocaa Ibraahim Saafii.
Ogeessoonni damee kanaa baayyeen meeshaalee bu'a qabeessoo ta'aniitti fayyadamuun wayita fakkiiwwanii fi bobboca hojjatan dhaggeessanii jirtu ta'a.
Haa ta'u malee Ibraahim feestaalaafi waraqaalee gataman walitti qabuun waan ajaa'ibaa hojjataa jira.
Akka BBC'tti himeettis Ibraahim festaalii kiilogiraama 500 magaalaa Gobbaa keessa naanna'ee guure.
'Ogummaa fakkii kaasuu du'a haadhaan booda'' Fakkiiwwan kaasu tokko tokko abjuunan arga'
'Fakkiiwwan kaasu tokko tokko abjuunan arga'
"Yeroon kosii keessaa festaalii guuruu namoonni waanin fayyaa qabu hin see'an,'' kan jedhu artist Ibraahim Saafi, festaalii walitti qabeen mana agarsiisa aartii yookin gaalarii abbaa darbii tokkoo ijaare.
Riipportarri keenya akka taajjabeetti, jalqaba gara gaalarii kanaa yoo seenamu darbii feestaaliin walirratti tuullamee hojjetame irra dhaabbachuun sodaachisaa dha. Haa ta'u malee hojiileen aartii gaalaricha keessaa qalbii namaa kan hawwataniifi sodaa kan dagachiisani dha.
Ibraahim Saafii godina Baalee jiraataa magaalaa Gobbaa uumamaa fi aartii walitti madaqsee tokko isa kaan osoo hin miidhiin waliin akka jiraataniif tattaafachaa nama jiru dha.
Fakkiiwwan namoota bebbeekamoo waraqaa raajii, sharaa, komborsaatoo fi gogaa loonii irratti kaafaman akkasumas bobbocawwan waraqaa fi festaalii irraa hojjetaman hojiilee aartii gaalarii Ibraahim keessatti kanneen argamani dha.
Kosii/balfa pilaastikaa naannoof yaaddoo ta'an gara artii daawwatamuutti jijjiiruu.
Balaa ayyaana irreechaa bara 2016 qaqqabe ture irratti shamarree rifaatuun bilbila bilbiluuf yaalaa jirtu fakkiiwwan Ibraahim Saafi kaase keessaa tokko.
Ibraahim hojii bobbocaa fi fakkii osoo hin eegaliin dura gaarii fardaa oofun haadha warraa fi ijoollee isaa gargaaraa ture.
Fedhii hojii aartii olaanaa qabaatullee maallaqa meeshaalee hojii fakkii fi bobbocaatiif barbaachisan ittiin bitu dhabuun rakkachaa akka ture BBC'tti hime.
Kanaafis "Waan burushii ittiin bitu waanan dhabeef farda gaarii ittiin harkisu irraa rifeensa eegee mureen burushii hojjedhe. Huccuu abujadee fakkii irratti kaasu bituuf humni waan na hanqatefis wantootuma naannoo koo jiran kan akka waraqaa raajii fi komborsaatoo ciccite sassaabeen fakkii irratti kaasuu kan jalqabe" jedha.
"Duraan rakkootu haala kanaan akka hojjedhu na taasise; amma garuu addunyaaf furmaata waan ta'un hojjechaa jira" kan jedhu Ibraahim, amma meeshaalee naannoo faalanii fi akka balfaatti gataman walitti qabuun hojii aartii ittiin hojjata.
"Osoo waraqaa fi festaalii kana guurree as fiduu baannee magaalaa tana akka hin jirre godha ture. Yoo walitti qabnee gubnes kaarboonii gara qilleensaatti gad lakkifama. Kanaafuu faalama kaarboonii kana hambisuun danda'ameera" jedha ogeessi fakkii fi bobbocaa Ibraahim Saafi.
"Balfa gatame tokko yeroon ilaalu yaada guddaa lafatti kufe tokkotu natti mul'ata. Yaada sana ol kaasun immoo dirqama kiyya" kan jedhu Ibraahim hojiin aartii ittiin of bohaarsuuf eegale amma hojii idilee galii irraa argatu fi ittiin of jiraachisu ta'eera.
Hojiilee aarti hojjete ni gurgura tuuristootnis gaalarii isaa ni daawwatu.
"Namoota waliin osoo deemtuu isaan keessaa duubatti haftee balfa keessaa waa kaasuu dandeessa" kan jedhu Ibraahim gara fulduraatti gaalarii guddaa aadaa Afrikaanotaa keessatti agarsiisu hojjechuuf hawwii akka qabu hima.
Gaalarii kana hojjechuuf immoo wantootni naannoo isaatti argaman heddu akka jiran dubbata.
"Haa ta'u malee haala amma jiruun hojiilee aartii baay'ee yoon hojjedhe iddoon itti agarsiisu hin qabu" jechuun rakkina iddoo hojii wayita ammaa kana keessatti argamu hima.
"Fakkiiwwan kaasu tokko tokko abjuunan arga" - Yamaanee Hundee
Viidiyoo, Aartii Oromoo fakkiidhaan
Viidiyoo, Ogummaa fakkii halluu baala, hidda, biyyee fi kannen birootti fayyadamuun kaafamu
Daangaa Itoophiyaafi Sudaanitti loltoonni ajjeefamuu Sudaan himte
Mootummaan Dr Illeenii G/Madiin mana maree gorsitoota dinagdee keessaa baase
Haleellaa Godina Shawaa Lixaa Noonnootti raawwateen lubbuun namootaa darbe
21 Sadaasa 2021
Boorana, Gujii, Harargee, Baalee… hongee Oromiyaatti hammaate
Waan 'Google' waa'ee keenya beeku akkamiin balleessuu dandeenyaa?
Yeroo dhuma kan haaromfame: 22 Muddee 2017
Boeing yaaddoo nageenyaa xiyyaara 737 MAX waliin walqabatee ka'u fudhatama hin qabu jedhe
Liiverpuul qabxii tokko qofaan Chelsiin caalamuun lammaffaa qabate
Yeroo dhuma kan haaromfame: 3 Ebla 2021